Igwefoto-eyi Nwa Ejiri nwere ike ọ gaghị abụ ikpe ikpe | Ngwọta OMG
N'ihi na igwefoto ahụ na-edekọ ihe dị oke ọsọ karịa nke ụlọ ahịa na-achọkarị mma ma ọ bụ igwefoto na-ahụ maka nchekwa, ọ ga-esiri ike na nkọwa ga-efu na oghere nke millisecond dị n'etiti okpokolo agba, dị ka oge ụfọdụ na ngwaọrụ ndị ahụ. Ndị mmadụ na - aghọtaghị usoro mmegharị ahụ agaghị eme ka ọ pụta ihe mgbe ị na-elele eserese a. Ha ga eche na onye uwe ojii ahụ na-agbagide ọsọ ọsọ nke ihe a ka igwefoto dekọtara ya. Yabụ, na enweghị ntinye ihe ọmụma, o yighị ka ha ga-aghọta otu onye uwe ojii nwere ike isi kpachara anya tinye ịtụgharị na azụ onye a na-enyo enyo ma ọ bụ gbaa mgbakwunye ọzọ mgbe iyi egwu kwụsịrị.
Ole n’ime ihe eserese igwefoto na-adabere nke ukwuu n’ebe ọ dị na ebe ihe ahụ na-ewere ọnọdụ. Dabere na ọnọdụ ya na akụkụ ya, akụkụ ahụ gị nwere ike igbochi eserese, site na imi gị aka. Igwefoto enweghi ike ijide ihe 360degree maka onodu enwere ike ime. Ihe a agaghị enye anyị ezigbo nkọwa nke ihe merenụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ị na-agba egbe ma ọ bụ Taser, dịka ọmụmaatụ, igwefoto dị na obi gị agaghị edekọ karịa aka na aka gị agbatị. Ma ọ bụ na ị na-agbachi ihe ị na-ekwu nwere ike ime ka ele igwefoto anya. Oge dị egwu n’ime ọnọdụ ị ga - ahụ ka ọ nwere ike tufuo ozu gị kpamkpam n’ihi ihe ndị a na - eme, na - emechi ihe onye nyocha nwere ike ịhụ iji mee mkpebi ziri ezi.
Igwefoto-yi ornbụ nwoke nwere ike ọ gaghị abụ ikpe ikpe ikpeazụ gbanwere ikpeazụ: December 3rd, 2019 by admin
Nzuzo 3268 10 Echiche Taa